Aluminium solid panel fekitori - China aluminium yakasimba pani Vagadziri, Vatengesi
Hyperbolic aluminium veneer ine chitarisiko chakanaka chinoratidza maitiro, inogona kugadzira zvivakwa zvakagadzirirwa, uye inogona kugadzirwa uye kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi kuzadzisa zvido zvekuvaka zvebato rekuvaka. Iyo yakapetwa yakapetwa aruminiyamu veneer inotora yemukati chimiro isina mvura uye yekuisa chisimbiso kurapwa, kuitira kuti ive nechokwadi chekushomeka kwayo kwemvura kushanda kusvika padanho rakakura. Inogona zvakare kushandiswa pamusoro peiyo hyperbolic aluminium veneer Tsvina mavara akasiyana siyana epende kuti uwedzere kusimudzira zvinoonekwa. Kugadzirwa kwehyperbolic aluminium veneer kwakanyanya kuomarara, uye izvo zvinodiwa pakururamisa kwemuchina uye mashandiro ekushanda kwevashandi vehunyanzvi akareba zvakanyanya, saka iyo hyperbolic aluminium veneer ine yakasimba hunyanzvi hwehunhu.
4D kutevedzera huni zviyo aruminiyamu veneer inogadzirwa yemhando yepamusoro-yakasimba-yakasimba alloy aruminiyamu ndiro, yakaputirwa neyepasi rese yepamusoro pateni nyowani yekushongedza zvinhu. Iyo pateni iri yepamusoro-giredhi uye inoyevedza, iwo marara uye magadzirirwo akafanana nehupenyu, iyo pateni yakasimba uye inopfeka-inodzivirira, uye haina formaldehyde, isiri-chepfu uye inokuvadza gasi kuburitswa, kuti iwe usazonetseke nezve iyo munhuhwi nekukuvara kwemuviri kunokonzerwa nependi neglue mushure mekushongedzwa. Ndiyo yekutanga sarudzo yekushongedza kwepamusoro-giredhi.
Mavara mazhinji anogona kusangana nezvinodiwa zvechivako zvemazuvano zvemavara.Pamwe nePVDF yekupfeka, iro ruvara rwakagadzikana pasina kupera, .Good Uv-proof uye yekurwisa-kukwegura kugona inoita kuti imire kukuvara kwenguva refu kubva kuUv, Wind, acid mvura uye marara gasi. .Besides, PVDF yekupfeka yakaoma kune yakasvibisa zvinhu kutevedzera, saka inogona kuramba yakachena kwenguva yakareba uye iri nyore kuchengetedza.Light Kuzvidzora-kurema, kwakakwirira simba, yakakwira inorwisa-kudzvinyirira kugona.Neiri yakapusa yekumisikidza mamiriro uye inogona kuve yakagadzirirwa kune akasiyana chimiro sekukombama, kuwanda-kupeta.Iyo yekushongedza mhedzisiro yakanaka kwazvo.
Perforated aluminium veneer chigadzirwa chakanatswa chealuminium veneer. Otomatiki kusanganiswa kuzvidzora punching muchina wakatumirwa kubva kuGerman unogona kuona kugadziriswa kwakasiyana siyana gomba zvimiro zvekubaya aruminiyamu ukanyatsotarisisa, kusangana nezvinodiwa nemutengi zvemhando dzakasiyana maburi maumbirwo, zvisizvo mugomba madhaimendi uye zvishoma nezvishoma shanduko maburi ekubaya aruminiyamu veneer, panguva imwe chete, kuve nechokwadi chekurova kubaya, kusangana nematanho epamusoro ekuvaka dhizaini kusvika padanho rakakura, uye kuratidza zvizere mazano matsva ekugadzira dhizaini.